Yintoni abathengisi abayikholelwayo ngaba ziimpumelelo ezi-3 eziphezulu ekuFakeni iiNkokeli | Martech Zone
Yintoni abathengisi abakholelwa ukuba ziiMpumelelo ezi-3 eziPhezulu ekuFakeni iiNkokeli
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 24, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Abantu abakhulu IFomstack kuvavanywe 200 amashishini amancinci naphakathi e-US kunye nezo zingenzi nzuzo zokuchonga apho abathengisi baya khona ngokuchanekileyo nangokungalunganga ngeendlela zabo zokukhokela. Le infographic kukubona ngokupheleleyo Imeko yokuBanjwa kweNkokeli ngo-2016 ukunika ingxelo ngokuqonda okubalulekileyo kwimiceli mngeni ekubanjweni kunye nezicwangciso.
Khuphela i-State of Lead Capture kwi-2016
Ukufumana kwabo okokuqala, ukuba ukuthengisa kufuna ukuqonda kwi ukuthengisa okuvaliweyo, ingaphaya kokugxeka. Into enomdla kukuba, iinkampani ezininzi zithengisa umgama kwintengiso-ngakumbi ukuba basebenza kunye nearhente. Kukho uloyiko olungaqhelekanga lokuba ukuba wabelana olo lwazi kunye nearhente yakho yokuthengisa kwaye uphumelele kakhulu, iarhente yakho yokuthengisa inokucotha kwiziphumo zazo okanye igqibe ekubeni inyuse amaxabiso. Ukuba loloyiko lwakho… ufuna iarhente entsha yokuthengisa.
Kuphela yi-19% yabathengisi abasebenzisa isoftware yokuthengisa yeCRM ukulandela umkhondo wabo
Isiphumo sesibini kukuba abathengisi kufuneka banciphise chitha kwintengiso yemidiya yoluntu. Andivumelani kwaphela. Ndicinga ukuba ngabathengisi mabenze ntoni, endaweni yoko, ukunciphisa ulindelo lwabo lokuba intengiso yemithombo yeendaba zentlalo iya kuvelisa izikhokelo ngqo (ngaphandle kokuphinda kuthethwe kwakhona). Sihlala sisebenza ngesicwangciso esihlawulelweyo kunye nabaxumi apho sinyanzela uguqulo ngophando oluhlawulelweyo, kodwa sikhuthaza umxholo kumajelo asekuhlaleni ukwakha ukuthembana kunye nokwazisa.
Ukuba ulinganisa impumelelo yokuthengisa kuphela ngubani obonakalise ukuba ukhokele, awunyanisekisi isicwangciso esiliqela sejelo kwiinjongo zabafundi abafanelekileyo. Imithombo yeendaba kwezentlalo sisixhobo esihle endinokukhuthaza abathengisi ukuba bonyuse inkcitho yabo, banganciphisi.
I-78% yabathengisi isebenzisa iAdwords zikaGoogle kunye nentengiso yemidiya yoluntu
Ukufunyanwa kokugqibela, ukuguqulwa kokusebenza, likwangcebiso eqinisekileyo. Ndichukumisekile yindlela abathengisi abaninzi abazama ngayo ukufumana imithombo emitsha yeendwendwe ngelixa bengazondli kwaye bangaguquki kwiindwendwe abanazo. Ukuvavanya i-verbiage, isithembiso, iphepha lokufika, iifom, ubeko, imibala, uyilo, iividiyo, iisayithi, uhlaziyo lwentlalo… yonke into enxulunyaniswa nobukho bakho bedijithali iya kunyusa amazinga okuguqula.
Izicwangciso zokwenza ubuchule azipheli njenetekhnoloji entsha, indlela yokuziphatha komsebenzisi kunye neendlela zoyilo eziqhubeka nokuvela. Sebenzisa kubahlalutyi, amaxabiso okuguqula, kunye novavanyo lwe-A / B ukwandisa iindwendwe onazo kubathengi.
I-45% yabathengisi ayinakubopha utyalomali kwiindawo ezithile zokuthinta ngophawu lwazo
tags: vavanyoUhlalutyoukuguqulwaukuguqulwa kokusebenzaizinga lokuguqulwaguqukaindlela yobumekwi-infographicbamba phambiliiindaba zentlalo zikhokelela ekubanjweniimithombo yeendaba zentlalo ikhokelauvavanyo
Ukukhutshwa kweBigCommerce 67 izihloko ezitsha ze-E-commerce
Feb 24, 2016 ngo-9: 55 PM
Uninzi lufunda ngezinto ezibalulekileyo ezinje. Enkosi ngolwazi kunye nolwazi.